Mankalaza Ireo Vorona Mivelona An-drano ao Karaibana ny Boky Elektronika Vaovao Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2017 10:44 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Italiano, Español, English
Vorondia miaina an-drano ao amn'ny Toeram-Piompiana Vorondia ao Pointe-à-Pierre, Trinidad. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nampiasàna fahazoandalana.
Mampiantrano karazam-borona mivelona an-drano mihoatra ny 185 i Karaiba — voron-dranomasina, vorona mpijobojoboka, vorona mivelona an-koraka sy ny vorona mivelona amoron-drano, anisan'izany ny vorona mpifindrafindra monina ary karazana maro tsy hita raha tsy amin'ny faritra iray sy tandindonin-doza eran-tany — ary isantaona, vorona maro no hita raha mamakivaky ireo honahona sy ny henihenin-dranomamy ireo mpahay siansa sy vondrona mpiaro, mba hanatsinjariana sy hiarovana ireo vorona an-drano any amin'ny toeram-ponenany.
VoronaKaraibiana, BirdsCaribbean – tambajotra iraisam-pirenena iray natokana ho an'ny fiarovana ny vorona manerana ny faritra, dia mitarika Fanisana Vorona Mivelona An-drano atao isan-taona (CWC), izay ahitana ny isan'ireo voron-drano ao amina toerana mihoatra ny zato ao amina nosy mihoatra ny folo.
Mandritra ny ririnina ny vorona no mipetraka maharitra, noho izany nalamin'ny CWC ho anelanelan'ny 14 Janoary sy 3 Febroary ny fanisana manerana ny faritra — ao amin'ny afovoan'ny ririnina (any Amerika-Avaratra) — mba hahazoana ireo voron-drano mponina sy toeram-ponenana ampiasainy manerana an'i Karaiba. Ny tena milay amin'ilay fanisana dia ny fahazoan'ny rehetra mandray anjara. Amin'ny fankaherezana izany fandraisana anjara tsy an-kanavaky ny mponina ao Karaiba izany, manana fahafahana hiteraka aingam-panahy amin'ny haivorona sy ny fiarovana ara-tontolo iainana avy amina taranaka iray ho amin'ny manaraka ilay fanisana. Ny tetikasa toa izany — indrindra ao amina faritra iray izany ny toeram-ponenana dia mampiantrano karazam-borona nasiana fehy sy tsy voamarika, sady mponina maharitra no mpifindra monina — dia manolotra fanazavana sarobidy ho an'ny fiadanana sy ny fahaveloman'ireo taranaka ireo.
Nahita fomba mamirapiratra mba hankalazana ny fahatsiarovana ny CWC andiany faha-valo amin'ity taona ity ny VoronaKaraibiana amin'ny fanaovana boky elektronika iray, ”Ireo Vorona Mivelona An-drano Karaibiana,” miaraka amin'ny tantara avy amina mpanoratra enina nahita fandinihana samihafa mikasika ireo vorona ireo. Misy amin'ny teny Anglisy, Frantsay sy Espaniola ilay boky.
Ganagana teo amin'ny Wild Fowl Trust ao Pointe-à-Pierre, Trinidad. Sary avy amin'i Janine Mendes-Franco, nampiasàna fahazoandalana.
Tsy misy afa-tsy andro vitsivitsy sisa no amin'ny fanisana amin'ity taona ity, fa raha maniry ny handray anjara ianao, afaka misintona ny taratasy natao ho fenoina sy ny bokikely hanoroana anao ianao. Ny torolalana ho an'ireo karazana roa amin'ny ambaratongam-panisàna 1 (ny ambaratonga mora indrindra) — Fanisàna teboka sy ny Faritra Fikarohana — dia afaka jerena eto. Afaka mampiditra izay angon-drakitra voaangonao ao amin'ny tranonkalan'ny eBird Caribbean ianao, izay mamela anao hitahiry ny fandinihanao amin'ny alalan'ny sary na sarintany, ary koa mampitaha ny angon-drakitrao amin'ireo toeran-kafa manerana an'i Karaiba. Izany angona midadasika be izany dia loharano tena tsara ho an'ireo mpahay vorona, mpahay siansa, ary mpiaro ny tontolo iainana, noho izany raha tsy azonao antoka ny mikasika izay vorona hitanao, makà fotsiny sary ary atolory ny vondrona yahoo an'ny CWC izany. Miezaka ihany koa ny Bird Caribbean mba hampitombo ny tranombokiny momba ny vorona amin'ny alalan'ny vondrona flickr-ny, mba hahafahanao mandefa sary ao koa.
Afaka mifandray amina vondrona mpiaro eo an-toerana ihany koa ianao mba hahitana hetsika fanisana ao amin'ny nosy misy anao; ny vondrona toa ireny dia azo inoana fa hankany amin'ny fanisàna ambaratonga faha-2 na 3 mandray anjara bebe kokoa, izay manana fepetra vitsivitsy amin'ny fiangambàn'ny fitsirihana .
Ny tena mahatonga ity tetikasa ity ho ilaina bebe kokoa dia ny hoe, satria hazaina ireo vorona an-drano, mila arahana maso ireo vorona mponina an-drano. Lazain'ny BirdsCaribbean fa taloha, tany mando maro tao amin'ny faritra no efa rava, na vokatry ny fiovan'ny toetrandro, na satria nampiasaina tamin'ny zavatra hafa ireo faritra ireo, anisan'izany ny fizahantany sy ny tetikasa fanorenana trano.
2 Febroary, ny andro mialohan'ny faran'ny fanisana, dia mety tsara amin'ny Andron'ny Faritra Mando Erantany, izay mankalaza ny daty nandaniana ny Fifanarahana momba ny Tany Mando, tamin'ny 1971, tao amin'ny tanàna Iraniana Ramsar. Nandritra ny 20 taona lasa, ny Sekretaria tao Ramsar dia namatsy fitaovana fanentanana mba hanampiana amin'ny fampatsiarovan-tena ny be sy ny maro momba ny maha-zava-dehibe sy ny hasarobidin'ny faritra mando.